I-Solomon Islands, Melanesia - World Tourism Portal
I-Solomon Islands, Melanesia
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha ye-The Solomon Islands
Bukela ividiyo ekhuluma nge-The Solomon Islands
Hlola iziqhingi zaseSolomon Islands isiqhingi saseNingizimu Pacific empumalanga Papua New Guinea. Zisendaweni ekahle yemizila yolwandle phakathi koLwandlekazi Oluseningizimu Pacific, Ulwandle lweSolwandle nolwandle lweCoral.
ISol Islands Islands iyizwe elibanzi leziqhingi futhi ibanga eliphakathi kweziqhingi ezisentshonalanga kanye nasempumalanga liqhele nge-1,500km (930 mi). Iziqhingi zaseSanta Cruz.
ISolomon Islands kukholakala ukuthi bekuhlala abantu baseMelanesia izinkulungwane zeminyaka. Kukholakala ukuthi abafokazi abakhuluma ngePapuan baqala ukufika ngase30,000 BC. Izikhulumi zase-Austronesian zafika ngo-4,000 BC cishe ngenkathi ziletha izinto zamasiko anjengokuphuma kwesikebhe. Kuphakathi kwe-1,200 ne-800 BC lapho okhokho bakhona AbasePolynesia, abantu beLapita, bafika bevela e-Bismarck Archipelago bephethe izindikimba zabo ezinobumba.
Isiqhingi saseSolomon Islands siyingxenye yezindawo ezimbili zomhlaba ezihlukene. Iningi leziqhingi liyingxenye yamahlathi emvula aseSolomon Islands ecoregion. La mahlathi angena ngaphansi kwengcindezi enkulu evela emisebenzini yamahlathi. Iziqhingi zaseSanta Cruz ziyingxenye yamahlathi emvula aseVanuatu, kanye nesiqhingi esingumakhelwane saseVanuatu. Izinhlobo ezingaphezu kwama-230 zama-orchid nezinye izimbali ezishisayo zikhanyisa ubuhle bendawo yomhlaba. Iziqhingi ziqukethe izintaba-mlilo ezimbalwa ezisebenzayo nezishubisa umnkantsha iTinakula neKavachi njengezisebenza kakhulu. Iphuzu eliphakeme kakhulu yiMount Makarakomburu, ngamamitha we-2,447. Iningi lama-coral aphansi aqukethe indawo esifundeni.
Isimo sezulu sendawo yolwandle esiqhingini sinomswakama omningi kakhulu unyaka wonke, sinomqondo wokushisa we-27 ° C kanye namaqondo okushisa ambalwa noma ambalwa. NgoJuni kuya ku-Agasti yisikhathi esipholile kunazo zonke.
Indawo esenyakatho kakhulu; kufaka phakathi i-Treasure Islands kanye ne-Shortland Islands kanye ne-Choiseul uqobo
Iziqhingi zaseFlorida naseRussia
IGuadalcanal (Honiara). Isiqhingi esikhulu enenhloko-dolobha enkulu kanye nesikhumulo sezindiza esikhulu
I-New Georgia Islands
ISan Cristobal kulesi siqhingi yaziwa nangokuthi iMakira
Iziqhingi ezincane ezikude zaseSanta Cruz Islands eseningizimu empumalanga, eduze neVanuatu kunanoma iyiphi enye indawo eSolomons
ISanta Isabel lapho ukuthintana kokuqala kwaseYurophu kwenziwa neSolomon Islands
IHoniara Inhlokodolobha YaseSolomon Islands - Isifundazwe saseGuadalcanal
IGizo Western Province
Isifundazwe sase-Auki Malaita
INoro New Georgia Island, Western Province
IMunda New Gerogia Island, Isifundazwe saseNtshonalanga
Iziqhingi zaseYandina Russell, eSifundazweni Esiphakathi
Isifunda saseTulagi Central
Buala Santa Isabel, Isabel Isifundazwe
Isifundazwe saseKirakira Makira-Ulawa
Isifunda saseLata Temotu
Isifundazwe saseTaro Choisel
ITigoa Renell kanye neSifundazwe saseBellona
Isikhumulo sezindiza i-Honiara International sitholakala kumakhilomitha angama-8 ngasempumalanga yenhlokodolobha,
Imikhumbi ehamba ngezikebhe ngezikhathi ezithile ihambela iHoniara kanye nezifundazwe ezingaphandle njengengxenye yohambo oluhleliwe. Ngokuvamile akwenzeki ukusebenzisa le mikhumbi njengendlela eyodwa yokuya noma ibuya ezweni.
Izikebhe zokungcebeleka zivame ukuvakashela iSolomon Islands, eziningi zihlala isikhathi eside ukuze zijabulele futhi zihlolisise iziqhingi eziningi, iziqhingi zamakhorali nezichibi ezinhle.
Ngenxa yokwakheka kwezwe, abakwaSolomon Islanders basebenzise kakhulu ukuhamba olwandle futhi ezimeni eziningi le ndlela okubonakala sengathi iyindlela ehamba phambili yokuhamba. Ngenkathi lokhu kungeyona indlela esheshayo yokufika lapho uya khona, ukuhamba ngemikhumbi ngolwandle kungaba okubabazekayo futhi kukuyise ezindaweni ezihamba kancane. Njengoba iningi linikezela ngezinto eziyisisekelo, nazo zishibhile kakhulu kunokuhamba ngendiza.
Iziqhingi ziyikhaya labomdabu abangaphezu kwe-120 Melanesiaizilimi, kanye nezakhamizi eziningi ezikhuluma i-Pidgin yaseMelanesia yasendaweni njengesi-lingua franca. IsiNgisi lulimi olusemthethweni, kepha olukhulunywa yi-1 kuphela noma i-2% yabantu.
Eminye yemisebenzi ethandwa kakhulu eSolumb Islands i-duba diving. Njengengxenye yeCoral Triangle, abakwaSolomons banikeza ezinye ze-diving ezinhle kakhulu eningizimu pacific. Kune-opharetha eyodwa yasendaweni eHoniara enikezela uhambo losuku eziqhingini eziseduze nasogwini lolwandle e-Bonegi Beach ethandwa kakhulu. Ngaphezu kwalokho, opharetha ababukhoma abasebenza ngaphakathi banikezela uhambo oluhlukahluka ukusuka ku-7 kuya ezinsukwini ze-14 behlola izindawo ezikude kakhulu kumaSolomons. Kukhona nabasebenza eMunda, Gizo nase-Uepi kanye nokusebenza okuningana okuncane okuhlakazekile eziqhingini ezikude. Umthombo omuhle wolwazi yiSolomon Islands Visitors Bureau.
Ama-ATM ayatholakala eHoniara. I-Australia amadola amukelwa kwamanye amahhotela nakwezinye izindawo zokungcebeleka.
Inqwaba yabantu incike kwezolimo, ukudoba kanye namahlathi okungenani ingxenye yezindlela zabo zokuziphilisa. Izimpahla ezenziwa kakhulu nemikhiqizo kaphethiloli kufanele ingeniswe ezweni. Iziqhingi zicebile ngemithombo yezokumbiwa engafakwanga efana nomthofu, i-zinc, i-nickel negolide. Kodwa-ke, udlame olukhulu lobuhlanga, ukuvalwa kwamabhizinisi asemqoka, kanye nomgcinimafa kahulumeni ongenalutho kuholele ekuqhekekeni okukhulu kwezomnotho, empeleni sekusondele ukuwa. Ukulethwa kwamathangi kwezinto ezibalulekile zikagesi (kufaka phakathi lezo zokuphehla ugesi) sekuyindlala ngenxa yokungakwazi kukahulumeni ukukhokha nokuhlaselwa kwemikhumbi. Ezokuxhumana zisatshiswa ngokungakhokhelwa kwezimali kanye nokuntuleka kwabasebenzi bobuchwepheshe kanye nabezokulungisa, iningi labo abalekile kuleli.
Noma kungekho iminyaka yokuthenga utshwala esemthethweni, iminyaka yokuphuza esemthethweni yi-21.
Yize ingabizi kakhulu, i-intanethi ephathekayo ihamba kancane. Amakhadi we-SIM akhokhelwa mahhala atholakala ku-Tele Telekom yethu nakwiBMobile. Yazi ukuthi iBMobile yiyona eshibhile, kodwa futhi inekusasa elingaphezulu. Ezinye izindawo eHoniara zizoba ne-wifi yamahhala.